समाचार Archives - Page 253 of 258 -
उमेशजंग र अजम्बर भनेका भोजपुरको विकासका पर्यावाची व्यक्तित्व: गगन थापा
काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आफ्नो अग्रज उमेशजंग रायमाझी भएको रोमाञ्चित हुने दाबी गरेका छन् । थापाले भोजपुरबासीले गर्वका साथ उ मेरो सांसद हो भनेर भन्न सक्ने समेत बताएका छन् । उनले एक भिडियो सन्देश मार्फत विद्यार्थी राजनीतिमा आफूभन्दा सिनियर रहेका रायामाझीलाई जिताउन भोजपुरबासीलाई आग्रह गरेका छन्...
विश्वभरि चिनिएका नेपालको एक मात्र जाती शेर्पाका एक्ला उम्मेदवार
काठमाडौं। यही मंसिर १० गते हुन गईरहेको प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा सोलुखुम्बु जिल्लाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यको लागि लाक्पा शेर्पा संघीय समाजवादी फोरम, नेपालबाट चुनावी मैदानमा उत्रेका छन् । सम्पूर्ण शेर्पाहरुको प्रतिनिधित्व गर्दै शेर्पा समुदायबाट प्रतिनिधि सभामा उपस्थिति जनाउन कम्मर कसेर लागि परेका प्रतिनिधि सभा सदस्यका ...
नयाँ दिल्ली, भारत, १८ कात्तिक । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार यहाँको प्रतिपक्षी दल भारतीय कँग्रेसका भ्रष्टाचारजन्य गतिविधिमाथि कडा आलोचना गर्दै उक्त दललाई ‘धमिरा’को संज्ञा दिनुभएको छ । उत्तर भारतको हिमाञ्चल प्रदेशको कङ्ग्रामा भएको राजनीतिक सभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा प्रधानमन्त्री मोदीले सो शब्दावली ...
राजविराजमा पनि सरसफाईको अभियान
सप्तरी, १८ कार्तिक । राजविराज २ तेतरी गाछीका युवाहरूले सरसफाई प्रति रुचि देखाउँदै सरसफाईका लागि सक्रिय भएका छन् । शनिवार वडा २ का वडावासीहरूको सहभागितामा संचालित १५ हप्ते सरसफाई अभियानको पहिलो दिनको सुरूवात गरेको हो । तेतरी गाछी चौकको वरिपरि देखिएको फोहोरको सरसफाई गरेको छ भने टोलवासीहरूलाई फोहोर जथाभावी नगरी उचित ठा...
डोटीमा जिप दुर्घटना, तीनको मृत्यु, आठ घाइते
डोटी, १८ कात्तिक । डोटीको केआई सिंह गाउँपालिकाको देउरडीमा जिप दुर्घटना हुँदा तीनजनाको घटनास्थलमै मृत्यु भएको छ भने आठजना घाइते भएका छन् । मृत्यु हुनेमा आदर्श गाउँपालिका–१ सालगाउँकी १९ वर्षीया अनिता खड्का, केआई सिंह गाउँपालिका–१ का ५५ वर्षीय गाडी चालक खेमराज ओझा र बोगटान गाउँपालिका–६ गगुडाका २५ वर्षीय रोशन ताम्राकार...
नेपाल भारतीय गुण्डा र तस्करको सुरक्षित अखडा बन्दै
पोखरा १८ कात्तिक । दुई भारतीय काठमाडौंको कमलादीबाट पेस्तोलसहित पक्राउ परेको घटना सेलाउन नपाउँदै प्रहरीले ३ भारतीय सुटरसहित १ नेपालीलाई पोखराबाट पक्राउ गरेको छ । नेपाल प्रहरीले शुक्रबार साँझ पोखराको सिद्धार्थ चोकमा सामान किन्दै गरेको अवस्थामा उनीहरुलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ परेकाको परिचय भने प्रहरीले खुलाएको छैन ।...
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कानूनीरुपमा अनुमति प्राप्त व्यक्तिका नाममा रहेका हातहतियार (बन्दुक, पेस्तोल) निर्वाचन अवधिभर कात्तिक मसान्तभित्र अनिवार्यरुपमा बुझाउन सर्वसाधारणसँग अनुरोध गरेको छ । कार्यालयले सुरक्षाको काममा खटिएका सुरक्षाकर्मी तथा कानूनबमोजिम लिन पाउने हतियारबाहेक अन्य कुनै पनि व्यक्तिले कुनै प्र...
तरुण दलका उपाध्यक्ष रेग्मीद्धारा राजीनामा
नेपालगञ्ज १६, कात्तिक । तरुण दल बाँकेका उपाध्यक्ष मनिष रेग्मीले पद र संगठनबाट राजीनामा दिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको उम्मेदवार छनौट प्रक्रियाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै रेग्मीले बिहिबार मनोनयनका दिन उपाध्यक्ष पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । रेग्मीले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै आजैको मितिदेखि लागू हुनेगरी राजीनामा दिएको घोषणा ग...
सिरहा क्षेत्र नं. २ को (१) मा फोरम नेपालका कोषाध्यक्ष विजय यादवको उम्मेदबारी
सिरहा १६, कात्तिक । संघीय समाजवादी फोरम नेपालका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष विजय कुमार यादवले सिरहाको निर्वाचन क्षेत्र नं. २ बाट उम्मेदबारी दर्ता गराएका छन् । सिरहाको क्षेत्र नं. २ को (१) प्रदेश सभा सदस्यका लागि यादवले उम्मेदबारी दिएका हुन् । आगामी मंसिर २१ गते हुने निर्वाचनका लागि कोषाध्यक्ष यादवले बिहिबार दलबलसहित निर्वा...
माओवादी केन्द्रका उम्मेदवारहरुको अन्तिम सूची
काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले बिहीबार हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यको दोस्रो चरणको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिने उम्मेदवारहरुको नामावली तयार पारेको छ। माओवादी केन्द्रको बैठकले बिहीबार उम्मेदवारी दर्ता हुन लागेका निर्वाचन क्षेत्रका उम्मेदवारहरुको नाम टुंगो लगाएको हो। निर्वाचन आयोगले बिहीबारको लागि दोस्रो च...